merolagani - २०० सेग्मेन्टका मोटरसाइकल बीच चर्को प्रतिस्पर्धा, तपाईंको रोजाइमा कुन ?
२०० सेग्मेन्टका मोटरसाइकल बीच चर्को प्रतिस्पर्धा, तपाईंको रोजाइमा कुन ?
Feb 27, 2021 02:09 PM Merolagani
आकर्षक लुक्स, उत्कृष्ट पावर र पर्फमेन्स । एकसय ५० भन्दा माथिनै ग्राउन्ड क्लीयरेन्स र एबीएस फिचर । यी र यस्तै बिशेषताका कारण नेपालमा दुईसय सेग्मेन्टका दुईपाग्रे सवारी लोकप्रिय छन् ।
अफ रोड र अनरोड दुबै सडकका लागी सुहाउदो भएकालेपनि नेपाली बजारमा यस्ता मोटरसाइकलको क्रेज व्यापक छ । नेपालमा २०० सेग्मेन्टका ब्रान्डहरु धेरै छन् । तर, पावर पर्फमेन्सकै आधारमा राइडरहरुले मोटरसाइकल चुन्ने गरेका छन् ।
पछिल्लो समय नेपाली बजारमा ठूला सीसीका बाइक भन्दा साना र मध्यम स्तरका मोटरसाइकलमै आकर्षण छ । बजारमा २०० सेग्मेन्टथमा सबैभन्दा बढी बजार हिस्सा बजाजले नै ओगटेको देखिन्छ । अहिले १५० र २०० सेग्मेन्टका बाइक नै बढी माग रहेको व्यवसायीहरु बताउँदै आएका छन् ।
बिशेषगरी पावर र पर्फमेन्स नै चालकले खोज्ने भएकाले एनएस २००, अपाचे २००, हिरो एक्सपल्स, केटीएम ड्युक २०० नेपाली बजारमा चर्को प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । पावर पर्फमेन्स र समानको उपलब्धतालाई मध्यनचर गर्दै दुईसय सेग्मेन्टको बारेमा चर्चा गर्दै छौं ।
पल्सर एनएस २००
पछिल्लो समय नेपाली युवाको पहिलो रोजाइ नै पल्सर एनएस २०० बन्न पुगेको छ । २०० सेग्मेन्टको सबैभन्दा उत्कृष्ट मोटरसाइकल छनोटमा पल्सर एनएसमा नै युवाको क्रेज छ । उत्कृष्ट पावर र पर्फमेन्स र लुक्स नै एनएसको मुख्य बिशेषता हो ।
अफरोड–अनरोड दुबै सडकमा चलाउनको लागी सहज रहेको कारणपनि यो मोटरसाइकलले लोकप्रियता कमाएको छ । काठमाडौं उपत्यका लगाएत देशैभरी एनएसको बर्चस्व छ । नेपालका लागी बजाज मोटरसाइकलको आधिकरीक बितरक गोल्छा ग्रुप अन्तर्गतको हंसराज हुलास प्रा लिले बजाजको माटरसाइकल विक्री वितरण गर्दै आएको छ ।
यो बाइकले २३.५ पीएसमा ९५०० आरपीएम जेनेरेट गर्छ । अझ एनएस २०० एबीएस एफआई प्रविधिमा आएपछि युवाको क्रेज ह्वातै बढेको छ । १६९ एमएम ग्राउन्ड क्लियरेन्स रहेको यो बाइकमा १२ लिटर इन्धन क्षमता रहेको छ ।
अहिले नेपाली बजारमा यसको मल्य एबीएस वीथ एफआईकोको तीन लाख ७२ हजार र नन एफआईको मुल्य तीनलाख ४९ हजार रहेको छ ।
आरटीआर अपाचे २००
नयाँ नयाँ फिचर, अब्बल लुक्स र उत्कृष्ट पर्फमेन्सको कारण आरटीआर अपाचे २०० फोर भीमा युवाको क्रेज बढेको छ । अहिले यो मोटरसाइकलपनि एबीएस फिचरमा नेपाली बजारमा भित्रिउको छ ।
अन्य बाइकमा भन्दा फरक फिचर भएको यो बाइकल अफरोड अनरोड दुबैसडकमा उपयुक्त छ भने लामोदूरीको लागीपनि उत्कृष्ट रहेको छ । यो बाइक अहिले नेपालमा संकर गु्रप अन्तर्गतको जगदम्बा मोटर्सले विक्री वितरण गर्दै आएको छ ।
१९७ सीसीको इन्जीन दिइएको यो बाइक जसले २०.८० पीएसमा ९ हजार आरपीएम पावर जेनेरेट गर्छ । एक सय ८० एमएम ग्राउन्ड क्लीयरेन्स, १२ लिटर फ्युल ट्याङ्क, ५ स्पिड गियर यो मोटरसाइकलको प्रमुख बिशेषता हो । नेपाली बजारमा यसको मुल्य तीन लाख ५० हजार तोकिएको छ ।
केटीएम ड्युक २००
केटिएम ड्युक बाइक युवा पुस्ता लक्षित बाइकको रुपमा परिचित छ । सडकमापपनि युवाले नै हुइक्याइरहेको देख्न सकिन्छ । २०० सेग्मेन्टमा सर्वाधिक चर्चित यो बाइक गोल्छा गु्रपले विक्री वितरण गर्दै आएको छ । ठूला पाग्र, उत्कृष्ट पावर र लुक्सकै कारढा युवा पुस्ताका झुमिने गरेका छन् ।
१९९.५ सीसीको इन्जिन दिइएको यो बाइकको म्याक्सीमम पावर २४.६ बीपीएचमा १० हजार आरपीएम रहेको छ । पाँच स्पिड गियर, १३ लिटर फ्युल ट्याङ्ुक, एबीएर फिचर यसको प्रमुख बिशेषता हुँन । नेपाली बजारमा यसको मुल्य साढे पाँच लाख रहेको छ ।
हिरो एक्स पल्स २००
हिरो एक्स पल्स नेपाली बजारमा भित्रिएको झन्डै दुई बर्ष हुन लाग्यो । अफरोड बाइक भएको कारण सबैको रोजाइमा परेको छ । उत्कृष्ट पर्फमेन्स र सस्तो मुल्यकै कारण नेपाली बजारमा हिरो एक्स पल्स चढर हुइकिनेको कमि छैनन् ।
१९९.६ सीसीको यो बाइकले १८.४ पीएसमा ८ हजार आपीएम पावर जेनेरेट गर्छ । बीएस सिक्स मोडलको यो बाइकमा सिङ्गल च्यानल एबीएस, पाँच गीयर बक्स, आफरोडमा सहजै कुद्ने बाइकका मुख्य बिशेषता हुन । नेपाली बजारमा यसको मुल्य तीन लाख ९१ हजार तोकिएको छ ।
नेपाली बजारमा अन्य थुप्रै २०० सेग्मेन्टका बाइक ब्रान्ड भएपनि यी चार ओटा मोडल सर्वाधिक बिक्रि हुने र रोजाइमा परेका मध्यमा पर्छन् । अहिले भएका दुई सय सेग्मेन्टका बाइक चार लाख तलकै मुल्यमा उपलब्ध छन् ।